Fomba fahandro 9 tsy mampino miaraka amin'ny sombin-kazo no tena mampiavaka na lafiny | ThermoRecipes
Irene Arcas | 24/07/2021 10:00 | hazan-dranomasina
Ary mandritra ireo andro fialantsasatra, morontsiraka, pisinina, namana ary pisinina ...special clam! matsiro Eo amin'ny tsena dia afaka mahita sokajy karaza isan-karazany ianao, noho izany miankina amin'ny zavatra hitanao na ny teti-bola tadiavinao dia azonao atao ny misafidy amin'ireo karazany, habe ary soloina akoho mihitsy aza.
Azontsika ampiasaina izy ireo toy ny mpandray anjara ny lovia ary miaraka amin'ny sombin-javatra tsara Pan mankafy ny mampino sy matsiro saosy na mampiasa azy ireo ho arahina hanome izany fikitika manokana izany ho an'ny lovia ny vary o paty.
Clams a la marinera: Kilasika sy tena ilaina eo amin'ny tontolon'ny clams, dia ho tonga lafatra amin'ny sakafo manokana, na dia ny Noely!
Clams a la marinera miaraka amin'ny voatabia: Lovia raitra. Mety ny gaga amin'ireo mpitsidika antsika amin'ny alàlan'ny fanombohana haingana sy haingana izay azontsika omanina mialoha. Aza adino ny manana sombi-mofo tsara voatsoboka ao anaty saosy!
Clams amin'ny cider: Ary ho an'ireo fampiasa cider manokana, matsiro! Avereno indray, aza adino ny manompo an'ireo sombin-kazo ireo amin'ny sombi-mofo mahafinaritra. Io no fomba tsara indrindra hankafizana ny saosy anao.
Monkfish ao anaty saosy maintso miaraka amin'ny patsabe sy sifotra: Takelaka 10 misy akora vitsivitsy, mahasalama, matsiro ary maro loko. Platazo tonga lafatra tsotra izao!
Vary lasopy misy sifotra: Lasopy matsiro ho an'ny tanora sy ny lehibe izay tsy mety diso. Hahatalanjona ny rehetra io ary io fikasihan-tanana io dia hahatonga azy tsy ho resy !!
Vary lasopy misy ranom-boankazo Voasary: vary super miaraka amina ron-kena matsiro misy ranom-boasary, miaraka amin'ny sakafo nahandro Mediteraneana tsara indrindra.
Fettucini vongole: Fettuccine vita amin'ny clam, voaravaka saosy divay misy tsiro, manao ity fomba fahandro ity ho lovia mety indrindra ho an'ireo tia paty.
Akanjo misy clams: Tsaramaso manokana mahafinaritra ho an'ny Krismasy, miaraka amin'ny hodi-dranomasina. Mety amin'ny làlam-pahaizana lehibe.
Lasopy Chickpea misy sifotra: Tena mora atao, manan-kery amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona ary feno fananana. Ity no crème chippe izay atolotray anao. Andramo fa ho tianao izany.
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: hazan-dranomasina
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » lahatsoratra » Resipeo thermomix » hazan-dranomasina » Recipe 9 tsy mampino miaraka amin'ny sifotra
Resipeo 9 vita amin'ny voankazo amin'ny syrup